Lady Gaga ကိုယ်တိုင်တောင် မသိလိုက်တဲ့ စင်ဒရဲလားဝတ်စုံ – FemaleWear.net
ဖက်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဆန်းအပြားတွေ ဝတ်တတ်တဲ့ Lady Gaga ဟာ ၂၀၁၉ နှစ်အတွက် Golden Globes ပွဲကို အပြာရောင် dress နဲ့ တတ်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ စက်တင်ဘာလက ကျင်းပခဲ့တဲ့ Venice Film Festival ပွဲမှာတုန်းကတော့ ငှက်မွေးအတောင် ပန်းရောင် ဂါဝန်နဲ့ တတ်ရောက်လာခဲ့တာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ Los Angeles မြို့ Beverly Hilton မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Golden Globes ပွဲမှာတော့ စင်ဒရဲလားစတိုင် အပြာနုရောင် dress လေးနဲ့ ပွဲတတ်ရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအပြာနုရောင် dress လေး ဟာဆိုရင် ၁၉၅၄ခုနစ်က ခေတ်စားခဲ့တဲ့ ဖက်ရှင်ကို ပြန်လည်မှီငြမ်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Golden Globes ပွဲမှာတော့ Lady Gaga ဟာ A Star Is Born ဇာတ်လမ်းနဲ့ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်ဆု ရရှိခဲ့ပြီး A Star Is Born ဟာ ၁၉၅၄ ခုနစ်က ဇာတ်လမ်းကို အသစ်တဖန်ပြန်လည် ရိုက်ကူးထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ET ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ Lady Gaga ရဲ့ ဝတ်စုံဟာဆိုရင် အနည်းငယ်ဆင်တူတာဖြစ်ကြောင်း copy မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း ဓါတ်ပုံနှစ်ခု ယှဉ်တွဲ ဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ ဒီဝတ်စုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Lady Gaga ဟာ ပုံစံမှီငြမ်းထားတာ သိချင်မှတောင် သိပါလိမ့်မယ်တဲ့..။
— Lady Gaga Now ? (@LadyGagaNowNet) January 7, 2019
Golden Globes ပွဲအပြီးကျင်းပတဲ့ ပါတီပွဲမှာတော့ ဆုကိုပူပူနွေးနွေးရရှိထားတဲ့ Lady Gaga ဟာ အနက်ရောင် Evening Grown အရှည်ကို ဝတ်ဆင်ထားပြီး ငှက်မွေးအတောင်တွေနဲ့ အလှဖော်ထားတဲ့ လက်တွဲပစ္စည်းတစ်ခုကိုလည်း ကိုင်ဆောင်ထားပါတယ်။ ငှက်မွေးအတောင်လေးတွေကိုတော့ အနက်ရောင်၊ ရွှေရောင် အနည်းငယ်ဆီနဲ့ အလှဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Thank you @ralphlauren for this beautiful custom tuxedo gown and glamorous shrug. It made an already special evening extra special I love you ❤️❤️❤️ ?: @dia.getty @gettyentertainment
စိန်နားကပ်ကို ဝတ်ဆင်ထားပြီး အနီရောင်နှုတ်ခမ်းနီကို ဆိုးထားကာ အနက်ရောင် ရှုးဖိနပ်အရှည်ကို စီးထားပြီး ဝတ်စုံဟာ သူမနဲ့ အလွန်လိုက်ဖက်တာကြောင့် အားလုံးက နှစ်သက်သဘောကျနေကြပါတယ်။ Golden Globes ဆုပေးပွဲနဲ့ party ပွဲမှာ Lady Gaga ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ဝတ်စုံ(၂)စုံလုံးဟာဆိုရင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးသာဖြစ်ပြီး အထူးအဆန်းတွေသာ ဝတ်ခဲ့တဲ့ သူမအတွက်တော့ အားလုံးက ဝိုင်းပြီးသဘောကျနေကြပြန်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ရဲ့ Golden Globes ပွဲမှာ အလှဆုံးကတော့ Lady Gaga ပဲ ဖြစ်တာကိုလည်း ငြင်းလို့မရနိုင်ပါဘူးနော်။
Tags: Cinderella-style, Golden Globes, Lady Gaga
ကလေးတွေကို LV အိတ်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ Kim Kardashian
နီယွန်အင်္ကျီဖက်ရှင်နဲ့ LV ပွဲကို တတ်ရောက်လာတဲ့ Bella Hadid